WF (J) Series Plate Freezer miaraka amin'ny Refrigeration Unit-Plate Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Ny vata fampangatsiahana lovia toy izany dia azo ampiasaina amin'ny fanamaintanana ireo vokatra samy hafa ao anaty fitoeram-pako, lapoaly sy boaty, mety amin'ny hazan-dranomasina, hena kely fonosana ary sakafo hafa ao anaty sakana. Ny takelaka ao anatiny dia apetraka mitsivalana mba hahafahan'ny vokatra apetraka ao anaty fitoeram-bokatra na fonosana ao anaty lovia mba hivaingana kokoa. Ny vata fampangatsiahana lovia dia azo ampiasana amina piston na compresseur unit, izay misy feo ambany, fibodoana amin'ny habakabaka kely, fahombiazana avo lenta ary fandidiana mora, sns
●Ny vata fampangatsiahana dia mety ho Freon, Amonia na CO2 u Namboarina tamin'ny alàlan'ny rano anaty ranomasina Aluminium, naoty sakafo. Ny takelaka alimina 25mm matevina dia manome tanjaka avo, fanoherana harafesina avo ary fitarihana hafanana. Ny takelaka dia voaforona mandeha ho azy ary manana déformation farafaharatsiny.
●Ny valindrihana dia voaravaka sombin-javatra polyurethane iray miolakolaka mba hiantohana ny rafitra matanjaka sy hampihena ny fahaverezan'ny hatsiaka amin'ny fanesorana ireo tonon-taolana.
●PTFE Leak-free malefaka fantsom-pifandraisana, flanged na kofehy. Ny hosotra dia rakotra randrana vy 304L. u Ampiasaina miaraka amin'ny tarika compresseur BITZER natsangana.
●Mivory, tsy mila fametrahana an-tsaha, mora diovina sy serivisy.
WF-1J, gara 11
◆Faritra vokatra mahomby: 27.7m2)
◆Takelaka takelaka: 12
◆Fanadio takelaka: avy amin'ny 46mm ka hatramin'ny 95mm
◆Fahatanterahan'ny vata fampangatsiahana: 71.1kw
◆Fahafahana mameno refrigerant: R404A 80Kg
◆Vovon-tsigara: Roa 6G-30.2Y( BITZER) 22Kw × 2
◆fomba famatsiana iquid: valizy Danfoss TX
◆Condenser: exchanger hafanana akorandriaka, fantsom-barahina tsy manimba
1) Herin'ny maotera paompy solika: 1.5kw 380V / 50Hz
2) Fanery napetraka ny paompy solika: 5MPa
3) Fivoahan'ny paompy solika: 10L / min
4) Menaka hydraulic: menaka mekanika hydraulic No.46 68kg (Tsy voatery)
◆Refy ankapobeny: 4350 (l) × 1950 (w) × 2950 (h)